नेताहरूले राष्ट्रियता बिर्सिए भन्ने तर हामी नै आफ्नो चलचित्र नहेरेर अर्काको चलचित्रलाई हेर्न जाने ?
शिवहरि पौड्यालनेपाली दर्शकमाझ लोकप्रिय कलाकार हुन् । विशेषगरी हास्य कलाकारका रुपमा परिचित उनले थुप्रै टेलिसिरियल तथा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । हास्य टेलिसिरियल ‘जिरे खुर्सानी’मा लामो समय निर्देशन र अभिनय गरेका पौड्याल यतिबेला चलचित्र लेखन र निर्देशनको भूमिकामा पनि उत्रिसकेका छन् ।
उनको लेखन तथा निर्देशन रहेको पहिलो चलचित्र ‘लक्का जवान’ हिजो (शुक्रबार)देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको छ ।
यस चलचित्रका कलाकारसमेत रहेका शिवहरि ‘लक्का जवान’ एउटा ‘अर्ग्यानिक’ नेपाली चलचित्र बनेको दाबी गर्छन् ।
यो चलचित्रसँग अर्को नेपाली चलचित्र पनि प्रदर्शनमा आएकोबारे पौड्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले जुधाएको होइन, हामी निर्दोष छौँ । दुई वर्ष रोकिएको हाम्रो चलचित्र अहिले बल्ल बल्ल रिलिज गर्दा अर्को नेपाली चलचित्र जुधाउनु अन्यायको पराकाष्टा भयो । मानवता भन्ने नै देखिएन ।’
प्रस्तुत छ, शिवहरिसँग चलचित्र निर्देशनमा हात हाल्नुको कारण, नेपालमा विदेशी चलचित्रको प्रभाव, चलचित्र निर्देशनको आगामी यात्रा लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईले निर्देशन गर्नुभएको पहिलो चलचित्र ‘लक्का जवान’ प्रदर्शनमा आएको छ । कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?
एकदमै उत्साहित छु । दर्शकहरूले पनि उत्तिकै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । हामीले शहरका विभिन्न स्थानमा रोड शो गरेर हिँड्दा पनि दर्शकहरू चलचित्र हेर्न उत्साहित रहेको पायौं । हाम्रो फेरि ‘यूनिभर्सल सर्टिफिकेट’ पाएको चलचित्र हो । बच्चादेखि बुढा उमेरका हरेक दर्शकले हेर्न मिल्ने, हरेक उमेर समूहका दर्शकलाई रमाइलो प्रदान गर्ने खालको कमेडी जनरामा पारिवारिक चलचित्र बनाएका हौँ ।
हजुर त थुप्रै चलचित्रमा कलाकारका रुपमा काम गर्नुभएको व्यक्ति । अहिले आफैं लेखन एवं निर्देशनमा आउनुको कारण नि ?
मैले टेलिसिरियलसँगै धेरै एडफिल्महरू पनि बनाएँ । टीभी एडहरू पनि बनाएँ । म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेँ, डकुमेन्ट्री निर्देशन पनि गरेँ । आफै लेखेर सयौं स्टेज शोहरू पनि गरेँ । कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर मैले गर्न बाँकी के त ? भन्दा एउटा ठूलो पर्दाको चलचित्रमा लेखन तथा निर्देशन गर्ने थियो । सोही कुरा पूरा गर्न पनि चलचित्र लेखन र निर्देशन गरेँ । र, अर्को कुुरा सधै टेलिफिल्मको जमाना त नहुन सक्छ । अब, अलिकति आफूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफूलाई अपग्रेड त गर्दै जानुपर्‍यो । चलचित्र लेखन, निर्देशनको पनि अनुभव लिऔं न त, भोलिका दिनमा ठूलोपर्दाको चलचित्रको काम त बाँकी नै राखिस् भन्ने नपरोस् भनेर चलचित्र लेखन र निर्देशनमा हात हालेको हुँ ।
तपाई ‘लक्का जवान’को लेखक, निर्देशकसँगै कलाकार समेत हुनुहुन्छ, यी तीनवटै पात्रको आँखाबाट हेर्दा चलचित्र साँच्चिकै कस्तो बनेको छ ?
चलचित्र सिचुयशनल हास्य छ । चलचित्रमार्फत समाजलाई एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । जुन कुरा कथा पढ्दै जाँदा थाहा हुन्छ । उक्त प्रश्नमात्रै नछाडी अन्तिममा हामीले समाधान दिएर सचेत पनि गराएका छौं । समयमै सचेत भएन भने यस्तो अवस्था आउँछ है भन्ने किसिमले सचेत गराएका छौँ । अनि हामीले दोस्रो, तेस्रो जेनेरेशनका कलाकारहरूलाई पनि समेट्दै अलिकति जेनेरेशन ग्याप हुँदै गएको पनि देखाएका छौं । पहिलो जेनेरेशनले के गर्‍या थियो ? दोस्रोले के गर्छ ? तेस्रोले के गर्छ ? भन्ने कुरा चलचित्रमा देखाउन खोजिएको छ । चलचित्रभित्र एउटै परिवारमा धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ । हामीले बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिलाई कता जाँदै हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्ने दृश्यमा पनि राम्रै कलाकार राखेका छौँ ।
चलचित्रमा नयाँ पुराना धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ । धेरै कलाकारहरू हुँदा सबैलाई अझ भनौँ सम्पूर्ण पात्रलाई न्याय भएको छैन कि भन्ने आशंका पनि हुनसक्छ नि ?
एकदमै न्याय भएको छ । पोष्टरमा देखिनुभएका १५/१६ जना कलाकारहरू मुख्य/मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको शुरूदेखि अन्त्यसम्म कथा बढ्छ । उहाँहरूको पात्रलाई मज्जाले न्याय भएको छ । अरु पात्र चाहिँ आउने–जाने, आउने–जाने हो । नाम चलेको कलाकारहरू नराखेर हुने ठाउँमा पनि हामीले चलेको कलाकार राखेका छौँ । त्यसो गर्दा उहाँहरूबाट अभिनय पनि राम्रो आयो, त्यो सिनलाई पनि न्याय भयो भन्ने हो । मुख्य/मुख्यभन्दा अरु पात्रको कुरा गर्दा देखिएको जति कलाकारहरूलाई न्याय गर्न त कसैले सक्दैन । उहाँहरूले न्याय खोज्नुभएको पनि छैन । धेरै कलाकारहरू चलचित्रमा अभिनय गर्न उत्साहित भएर आउनुभएको हो । मुख्य–मुख्य पात्रलाई न्याय नभएको कुरामा चाहिँ शंका गर्नुपर्ने छैन ।
चलचित्रमा धेरै कलाकारहरू हुनुभए पनि प्रचार–प्रसारमा भने सीमित कलाकार मात्र देखिनुभएको छ नि ! किन ?
यो कुरा दर्शकलाई पनि थाहा छ । कलाकारहरूको पनि अरु काम हुन्छ, अरु चलचित्रहरू हुन्छन् । हामी जतिपनि लगाव दिएर हिँडेका छौँ, अरु त्यसरी नदेखिनुभएको हो ।
किरण दाई र म त प्रचारप्रसारमा निरन्तर नै लागिपरेका छौं । प्रचारप्रसारमा हामीलाई अहिले सबैभन्दा बढी सहयोग गर्नुभएको कलाकारहरूमध्येमा पहिलो नम्बरमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की हुनुहुन्छ । दोस्रोमा अभिनेता सलोन बस्नेत हुनुहुन्छ । दीलिप रायमाझी दाइले पनि साथ दिनुभएको छ । अरु कलाकारहरूले पनि साथ दिइरहनुभएको छ ।
अब प्रचारप्रसारमा मदनकृष्ण दाइलाई लिएर हिँड्ने कुरा आएन । सुशील पोखरेलजी पनि अलिकति व्यस्त नै हुनुहुन्छ । सरोज खनाल पनि कहिले कता, कहिले कता व्यस्त नै हुनुहुन्छ । भ्याएको समयमा अन्तर्वार्ताहरूमा आइदिनु नै भएको छ । तर, नियमित रुपमा उहाँहरूलाई प्रचारप्रसारमा लिएर हिँड्न सम्भव नभएको भएर कुनै–कुनै ठाउँमा आउनुभयो, कुनै ठाउँमा नदेखिनुभएको मात्रै हो । प्रचार–प्रसारमा सबै कलाकारहरूको राम्रै साथ पाएका छौँं ।
तपाईं कमेडी सिरियलमा काम गर्नुभएको । चलचित्रमा अन्य केही कलाकारहरू पनि कमेडी सिरियलमा काम गर्नुभएको कलाकारहरू हुनुहुन्छ । सो कारण चलचित्र पनि सिरियलकै धङधङीमा वा सिरियलकै शैलीमा बनेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?
चलचित्रमा कमेडी छ तर राख्ने भनेर जबरजस्ती राखिएको होइन । एउटा इस्यु उठाएर त्यसभित्र सिचुयशनल कमेडी छ । ७०/८० प्रतिशत रमाइलो छ, त्यसपछि मार्मिक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । ‘यस्तै अवस्था आयो भने...’ भनेर केही सोच्दै निस्किनुपर्ने अवस्था चलचित्र हेरेका दर्शकमा हुन्छ । यसको निर्माण पनि सिरियलको शैलीभन्दा पनि चलचित्रकै शैलीमा गरेका छौँ ।
अर्को साता स्थानीय तहको निर्वाचन छ । त्यसले चलचित्रलाई कत्तिको असर गर्ला ?
स्थानीय तह निर्वाचनले भन्दा हिजोदेखि प्रदर्शनमा आएको अंग्रेजी चलचित्रले नै असर गर्ने देख्छु । ‘केजीएफ’ अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ । ‘ए मेरो हजुर ४’ले पनि अलिअलि सिट पाइनै रहेको छ । अब हाम्रो चलचित्र पनि प्रदर्शनमा आयो । कुनै हलमा शो नपाएर खाली चाहिँ छैन, दर्शकहरू कत्तिको आउनुहुन्छ हेरौँ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ चलचित्रलाई असर गर्लाजस्तो लागेको छैन । किनकी चुनावी माहोलमा जानेहरू अर्कै हुन्छन्, चलचित्र हेर्ने अर्कै हुन्छन् ।
‘लक्का जवान’सँग बाहिरी चलचित्रसँगै अर्को नेपाली चलचित्र पनि रिलिज भएको छ । दुई नेपाली चलचित्र किन जुधाउनुभएको ? यसले त दुबै चलचित्रलाई असर गर्दैन र ?
हामीले जुधाएको होइन, हामी निर्दोष छौं । शुरूमा वैशाख २३ गतेका लागि हाम्रो एकल चलचित्र मात्र थियो । यो मितिमा अरु कुनै चलचित्र थिएनन् । ‘कबड्डी ४’ पनि यही मितिमा हालेको थियो । अनि निर्देशक रामबाबु गुरुङसँग रिक्वेस्ट गरेपछि ‘कबड्डी ४’ पछाडि सर्‍यो । चुनाव पनि आउन लाग्या छ भन्ठान्नुभयो होला उहाँहरूले ‘कबड्डी ४’ उक्त मितिबाट हटाउनुभयो । त्यसपछि ‘सम्झना बिर्सना’लगायत अरु चलचित्र पनि आएको थियो । हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँहरू पनि हाम्रो मितिमा नआउने हुनुभयो । अहिले अर्को नेपाली चलचित्र ल्याएर जुधाउनुभयो ।
‘लक्का जवान’ दुई वर्ष अगाडिदेखि थला परेको चलचित्र छ । यस चलचित्रसँग अर्को नेपाली चलचित्र जुधाउँदा यो उद्योगलाई पाप चाहिँ लाग्छ । दुई वर्ष अगाडि हल पनि थला परेको थियो । चलचित्र उद्योग पनि थला परेको थियो । प्रोड्युसर थला परेका थिए । बल्ल बल्ल अहिले रिलिज गर्न लाग्दा पनि ल्याएर त्यही चलचित्रसँग अर्को नेपाली चलचित्र जुधाउन ल्याउँछन् भने यो उद्योगको मान्छेलाई पाप चाहिँ लाग्छ । यसरी चलचित्र जुधाउँला दुबै नेपाली चलचित्रलाई असर गर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा अझ बढी त हामीलाई असर परेको छ ।
अढाई करोड लगाएर बनाएको चलचित्र दुई वर्षदेखि रोकिएको रोकियै थियो । अहिले उहाँहरूले चलचित्र जुधाउनै परे, नयाँ बनेको चलचित्रसँग ल्याएर जुधाउनु न । दुई वर्ष रोकिएको चलचित्र अहिले बल्ल–बल्ल रिलिज गर्दा अर्को चलचित्र जुधाउनु अन्यायको पराकाष्टा भयो । मानवता भन्ने नै देखिएन ।
‘लक्का जवान’ चल्नु र नचल्नुले तपाईंको चलचित्र लेखन एवं निर्देशनको आगामी यात्रामा कस्तो भूमिका खेल्छ ? अरु चलचित्र लेखन एवं निर्देशनको केही तयारी गर्नुभएको छ कि ?
दुई/तीनवटा प्रोजेक्ट आइरहेको छ । अब चलचित्र बनाउँदा चाहिँ यो किसिमको बनाउँदिन । थोरै लगानीमा, धेरै गीत–संगीत नराखिकन, निर्माता बच्ने किसिमको चलचित्र बनाउँछु ।
नेपालको निर्माताहरू डुबिरहने अनि नेपालबाट साउथ इण्डियन र इण्डियन चलचित्रहरूले रकम लुँड्याएर लग्ने भइरहेको अवस्था छ । हाम्रो देश नै सानो छ, हाम्रो मार्केट नै सानो छ ।
उनीहरूको करोडौं–करोड लगानीमा बनाएको चलचित्रसँग हाम्रो डेढ–दुई करोडमा बनाएको चलचित्रले प्रतिष्पर्धा गर्न त सक्दैन । नेपाली चलचित्र लगाएको अवस्थामा बाहिरी जुधाउन नपाउने, हिन्दी चलचित्रको पनि कोटा तोकि दिनुपर्ने गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो । जसरी पनि हल भरिनुपर्ने त हो नी ! विदेशी चलचित्र नदेखेपछि नेपाली चलचित्रमा पनि हल भरिन्छ नी । विदेशीसँग जुधाइ दिएपछि त्यसले व्यापार गर्‍यो नेपालीले सक्दैन पनि भन्न मिलेन नी त ।
नेपालीलाई पनि ठाउँ दिएर हेर्नुपर्‍यो नी । ठाउँ नै नदिने, विदेशी चलचित्र ल्याएर जुधाइदिने, नेपाली चलचित्र मारिदिने गरेपछि गाह्रो भयो । जस्तो कि अहिले दुई/तीनवटा साउथ इण्डियन चलचित्रले रकम लुँड्याएर लग्यो, नेपाली चलचित्रले कमाई गर्न सकेन । अहिले फेरि हाम्रोसँग अंग्रेजी चलचित्र आएको छ । अंग्रेजी चलचित्र हाउसफूल छ, नेपालीमा दर्शक कम छ । सबै चलचित्रलाई नराम्रो भनेर हेर्न पनि भएन, उनीहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्‍यो । सो कारण विदेशी चलचित्र नआउने भन्ने कुरै भएन । हामीले त्यही विदेशी चलचित्र हेरेरै चलचित्र बनाउन सिकेका हौं । मेरो विचारमा विदेशी चलचित्रका लागि एउटा समय तोकिदिनुपर्‍यो । बाँकी चाहिँ नेपाली चलचित्रहरूलाई तोकियो भने त हामी पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्थ्यौँ । विदेशी चलचित्र पनि आउन्, दर्शकले पनि चाहानाअनुसार हेरुन् । तर, एउटा सिस्टम बनाएर नेपाली चलचित्र नमर्ने गरी गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।
नयाँ चलचित्रको तयारी अगाडि बढाइसक्नुभएको हो ? त्यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न ।
धेरै कुराहरू भइसकेको छ । त्यसमा पनि मेरो लेखन, निर्देशन नै रहनेछ । उक्त चलचित्र नेपाल र विदेशमा छायाँकन गर्नेगरी कथा लेखिरहेको छु । चलचित्र युवापुस्ताको कथामा हुनेछ । चलचित्र वास्तविकतासँग नजिक रहनेछ ।
अझै केही समय चलचित्रको माहोलहरू सबै हेरेर मात्रै घोषणा गर्छु भन्नेमा छु । भदौबाट छायाँकनमा जाने सोच हो, हेरौँ । उक्त चलचित्रको लगानीमा भने मेरो पनि अलिकति सहभागीता हुन्छ । किनकी, निर्माताले यसलाई पनि लगानीमा सहभागीता गरायो भने अलिकति सिरियस भएर काम गर्छ भन्ने भन्ठान्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ । हुन त चलचित्रसँग जोडिएपनि राम्रो गराउन खोजिहालिन्छ । राम्रो गर्ने कोसिश सधैँ रहिरहन्छ ।
तर, अबको चलचित्रमा लगानी कम हुन्छ । कुनबेला साउथ र हिन्दी चलचित्र आउँछ डुबाइदिन्छ । त्यो अवस्था आएपनि टीभी च्यानललाई दिँदा, हलमा एकपल्ट लगाउँदा, यसो विदेशी साथीसँग रिक्वेस्ट गरेर मेरो चलचित्र लगाइदेनभन्दा पनि सुरक्षित हुने भइदेओस् । ७०–८० लाख भित्र नै चलचित्र बनाउन सकिने रहेछ । अबको चलचित्र सोही अनुसार गर्छु ।
अन्त्यमा हाम्रा पाठकहरू र तपाईका दर्शकहरूलाई ‘लक्का जवान’बारे के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो यो चलचित्र २ वर्ष अगाडि बनेको भएपनि यसको कथा अझ २० वर्ष पछाडि लगाउँदा पनि नयाँ नै हुने खालको छ । मैले दर्शकहरूलाई झुक्याएर हलसम्म ल्याउनु न्याय हुँदैन, एकपटक हेरिदिनुहोस् चाहिँ भन्न चाहान्छु ।
हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, राष्ट्रियताको भावना राख्ने, नेताहरूले राष्ट्रियता बिर्सिए भन्ने तर हामी नै आफ्नो चलचित्र नहेरेर अर्काको चलचित्रलाई राती १२ बजेको शो, ३ बजेको शो राखेर पैसा गुटमुटाएर विदेशी भूमिमा पठाउँछौँ ।
‘लक्का जवान’ अर्ग्यानिक, विशुद्ध नेपाली चलचित्र बनाइएको छ । विदेशी चलचित्र पनि हेर्नु तर नेपाली चलचित्रलाई पनि डुब्न नदिनुहोस् । सबै नेपाली चलचित्र राम्रो बनेको छ त म भन्दिन, तैपनि एकपटक ‘लक्का जवान’ हेर्नुहोला, चलचित्रले मनोरञ्जन अवश्य दिलाउनेछ ।
चलचित्र प्रदर्शन नहुँदासम्म हाम्रो हो, प्रदर्शन भएपछि दर्शकको भइसकेको छ । चलचित्र हेरिसकेपछि राम्रो/नराम्रो जस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला । नराम्रो चलचित्र बनाउने प्रयास त गरिएको छैन, नराम्रो लागे सुझाव दिनुहोला । राम्रो रहेछ भने झन हौसला दिनुहोला भन्न चाहन्छु ।
विदेशमा बस्ने निर्माता जो आफैमा कलाकार पनि हुनुहुन्छ धुव्र वन्त र अनुसुया श्रेष्ठ वन्त । उहाँहरूले आफूले दुःख गरी कमाएको पैसालाई चलचित्र उद्योगमा लगाउनुभएको छ । २/४ महिना नेपाली प्राविधिक, कलाकारहरूले रोजगार पाउन न त भनेर लगानी गर्नुभएको छ । एउटा चलचित्र बन्दा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ३/४ सय जनाले रोजगार पाउँछन् । चलचित्रसँग जोडिएको टिमले त काम पायो, जस्तो हामी शुटिङ गर्न जाँदा होटलले काम पायो । त्यो वरिपरीका पसलेले काम पाए । जाने–आउने गर्दा पेट्रोल धेरै बिक्यो आयल निगमलाई फाइदा भयो ।
चलचित्र बन्दा यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरै फाइदा भइरहेको हुन्छ । चलचित्र निर्माणको काम उहाँहरूले गरिदिनुभएको छ । उहाँहरूलाई नाफा चाहिएन, उहाँहरूजस्ता निर्मातालाई अर्को चलचित्र बनाउनका लागि सावाँ मात्रै आउने वातावरण भयो भने चलचित्र उद्योग जोगिन्छ । निर्मातालाई पलायन बनाउँदै लग्यो भने भोलि कलाकार र प्राविधिक मिलेर चलचित्र बनाउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा त्यसतर्फ सोचिदिनुहुन पनि दर्शकहरूलाई आग्रह गर्छु । मेरो निर्देशनको हिसाबले त ‘लक्का जवान’ डेब्यू चलचित्र, सो कारण मलाई दर्शकहरूको अझ बढी आशीर्वाद चाहिन्छ ।
वीरेन्द्रनगरको मुख्य चुनावी मुद्दा खानेपानी
धनगढीमा सन्दीप क्षेत्रीको विशेष प्रस्तुति हुँदै, निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था
स्टान्डअप कमेडियन तथा कलाकार सन्दीप क्षेत्रीको शुक्रवार धनगढीमा विशेष कार्यक्रम हुने भएको छ । एसईई र १२ कक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै एसपीए कलेज धनगढीले स्टान्डअप कमेडियन तथा कलाकार क्षेत्रीलाई ...